Anyị na-enyocha Moto Onye 5G Ace ọhụrụ | Gam akporosis
Motorola ekwuputala ngwaọrụ ọhụrụ na mpụga G, kpọmkwem ekwentị Moto One 5G Ace nke dị n'etiti etiti na njikọta nke ọgbọ nke ise. Ekwentị na - aghọ nhọrọ na - adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ị na - achọ ọnụ na - arụ ọrụ n’ihe gbasara ngwaike ma na - enye ọrụ Google n’ụzọ dị ọcha.
El Moto Otu 5G Ace Ebu ụzọ kwusaa ya maka ahịa US, mana ọ ga-erute ahịa ndị ọzọ, n'echiche a aha ụlọ ọrụ ahụ họọrọ nwere ike ịbụ nke ọzọ. Mgbe akpọsa ndị ọhụrụ Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) na Moto G Play (2021), na emeputa na-akpọsa a unit gbakwasara ndị na-achọ a arụmọrụ ma na-agba smartphone.
1 Moto One 5G Ace, etiti dị oke mma
Moto One 5G Ace, etiti dị oke mma
El Moto Otu 5G Ace a na-akpọ ka ọ bụrụ ọnụ nke ihe karịrị 6 sentimita asatọ nke nnukwu mmasị maka ndị na-achọ ezigbo arụmọrụ ekwentị. Ogwe ahụ bụ sentimita 6,7 nke nwere mkpebi Full HD + na bezels dị ụkọ, ha anaghị ebi ọbụna 10% nke akụkụ ihu.
Ọ na-emetụ iji mesie ike dịka ọmụmaatụ na ihuenyo bụ nke ụdị IPS LCD mana site na teknụzụ LTPS, yabụ ọ ga - enwe mkpebi dị elu yana, ọ bụrụ na ezughi, ọdịiche dị mma. Akụkụ akụkụ bụ 20: 9 na ihe niile echedoro ya na ọgbọ 5th Gorilla Glass (Gorilla Glass XNUMX).
Ihe nhazi ahụ bụ Snapdragon 750G, nke dị n'etiti na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma na ụdị ubi niile, ọbụlagodi na egwuregwu n'ihi na ọ dị n'ime usoro G. E wezụga nke ahụ, ọ na-agbakwunye 4/6 GB nke RAM, 64/128 GB nke ebe nchekwa RAM, ha niile nwere ike ịgbasa ya Oghere MicroSD.
Batrị 5.000 mAh kwere nkwa na ọ ga-adịgide ma kwụsị na arụmọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị zuru ezu, na-akwụ ụgwọ ihe karịrị otu elekere na 15W. Moto One 5G Ace na - enwe nnwere onwe dị ukwuu ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, ọ ga - enye ndị ahụ na - eji ekwentị n’ezi ndụ.
Motorola One 5G Ace batara na igwefoto anọ, ha nile na-ekwe nkwa a pụtara dị mkpa keakamere ọgụgụ isi, n'echiche nke njide bụ otu n'ime ndị kasị mma. Onye mepụtara ya nwere azụ atọ, nke mbụ bụ 48pipixels, nke abụọ bụ 8 megapixels wide angle na nke atọ bụ nnukwu megapixel 2.
Igwefoto n'ihu na-apụta ìhè n'enweghị obi abụọ ọ bụla, n'ihu na-abịa na igwefoto dị na 16 megapixel nwere ihe niile na-enye gị ohere ịdekọ vidiyo na Full HD. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ nwere ntụpọ, ọ na - enye mkpebi dị elu na ọ bụ otu n'ime ndị na-abịa na-eme mgbe ọ na-abịa ike weghara ọ bụla ụdị gburugburu ebe obibi.
E nwere igwefoto anọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu n'ụdị saịtị ọ bụla n'ihi na ha gụnyere AI (Artificial Intelligence) ma were foto dị mma n'ọnọdụ niile. Moto One 5G Ace bụ otu n'ime ọdụ na-achọ ịga n'ihu n'echiche ahụ na maka ego gbanwere ihe na-erughị $ 400.
El Moto One 5G Ace rutere na njikọta dị elu, ọ bụ ekwentị 5G n'okpuru SA netwọk dị ka NSA, Bluetooth 5.1, Dual Wi-Fi, GPS na ọ bụ Dual SIM ọnụ iji tinye kaadị telephony abụọ, onye ọrụ nwere ike ịhazi ya.
Usoro a bu Android 10 n’okpuru ihe nkpuchi My Ux site na Motorola, ọ dị ezigbo ọcha ma nwee ngwa ndị bụ isi maka iji ekwentị na Storelọ Ahịa Play. N'aka nke ọzọ, agbachi ngwaọrụ ahụ na akara mkpịsị aka azụ site na "M" maka Motorola.
IKIRU 6.7-anụ ọhịa IPS LCD (LTPS) na Full HD + mkpebi (2.400 x 1.080 px) / 20: 9
Graf Adreno 619
Ohere TERLỌ N'IME 64/128 GB / Gbasaa site na kaadị MicroSD
Gbanwee CAMERA 48 MP isi ihe mmetụta / 8 megapixel obosara n'akuku ihe mmetụta / 2 MP nnukwu ihe mmetụta
CAMERA N'IHU 16 MP
UMUAKA 5.000 mAh na 15W ngwa ngwa
OS Gam akporo 10 na UX m
Njikọ 5G SA / NSA / Bluetooth 5.1 / WiFi Dual / GPS / Dual SIM
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ
Mkpụrụ na arọ: 166.1 x 76.1 x 9.9mm / 212 gram
El Moto One 5G Ace biara maka ugwo nke $ 399 (326 euro na mgbanwe ahụ), bịarute na Jenụwarị 13 na ahịa US, ọ ka ga-ahụ ihe nnweta ya dị na mba ụwa, ọ ka ga-ahụ mgbe ọ ga-abata Spain. Ekwentị ga-adị na ọlaọcha ntụ ntụ na oji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Anyị na-enyocha Moto One 5G Ace ọhụrụ
Mepụta otu ìgwè nke anụmanụ na wizards na 33RD: Random Defense